Muqdisho: Xaafadaha Juungal Iyo Carafaat Oo Saaka Laga Taxaabay Dad Farabadan – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Ciidamada booliska iyo Nabadsugidda Soomaaliya ayaa saaka howlgal ballaaraan ka sameeyey qeyb ka mid ah xaafadaha Juungal iyo Carafaat ee degmada Yaakhshiid ee magaalada Muqdisho.
Dad degan xaafadahaas ayaa saaka soo toosay iyadoo ay albaabada ka taagan yihiin ciidamo farabadan oo wata gaadiidka dagaalka iyo gawaarida shabaqlayaasha ah ee dadka la qabto lagau qaado.
Howlgalka ciidamadu saaka ka sameeyeen degmada Yaakshiid ayaa yimid kadib markii xalay halkaas lagu dilay qof rayid ah oo ka mid ah dadka deegaanka.
Goobjooge degan Juungal ayaa Mareeg Media u sheegay in la qabtay dad farabadan oo ka mid ah dhallinyarada xaafadda uu degan yahay.
Laamaha amaanka dowladda federaalka Soomaaliya kama hadlin cidda lagu qabtay howlgakaan.
Howlgalka ciidamadu saaka ka sameeyeen degmayada Yaakhshiid ayaa kusoo beegmay xilli shalay galab agagaarka SOS lagu weeraray ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM.